उपसमितिको प्रतिवेदन प्र.अ. हुन एमफिल अनिवार्य « Everestweek – Nepal's Popular Digital NewsPaper
उपसमितिको प्रतिवेदन प्र.अ. हुन एमफिल अनिवार्य
१२ चैत्र २०७५, मंगलवार ११:१५
काठमाडौँ । शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षा नीति, कार्यक्रम तथा ऐनमा व्यापक सुधारको खाँचो आंैल्याइएको छ । यसका लागि विद्यालयलाई साधारण, व्यावसायिक तथा प्राविधिक तहमा विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले दिएको छ ।
उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई आज यहाँ हस्तान्तरण ग¥यो । समितिका सदस्य उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सो उपसमितिमा अञ्जना विशङ्खे, एकवाल मियाँ, चित्रलेखा यादव, मानबहादुर विश्वकर्मा, नवीना लामा, नारायणप्रसाद मरासिनी र योगेशकुमार भट्टराई सदस्यका रुपमा रहेको थियो ।
समितिका सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले शैक्षिक सुधारका लागि प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिनुभयो । समितिका अर्का सदस्य चित्रलेखा यादवले सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन प्रतिवेदनका सुझाव आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुने छ भने ।
बैठकमा समितिका सदस्य जीवनकुमार श्रेष्ठ, हितबहादुर तमाङ र सुरेशकुमार राईले व्यवहारिक र व्यवसायिक शिक्षाको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।